Wasiir Xaglo-Toosiye Oo Baaq Hogga-tusaale ah u jeediyay Galaydh | Salaan Media
Wasiir Xaglo-Toosiye Oo Baaq Hogga-tusaale ah u jeediyay Galaydh
Dubia (SM)- Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka, Somaliland, Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye), ayaa u soo jeediyay siyaasiga dibad wareega ah ee Cali Khaliif Galaydh inuu ku daydo Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo uu dadkiisa wax la qabsado.
Saleebaan Xaglo-Toosiye waxa uu ka jawaabayey hadalo ka soo yeedhay Cali Khaliif oo uu ku sheegay in aanay magaalada Buuhoodle iman karin mas’uuliyiin ka socda Somaliland.
Saleebaan Ciise Axmed (Xagle-toosiye) oo haatan ka mid ah wefti Wasiiro ah oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in magaalada Buuhoodle ka mid ahayd Somaliland, dadka deegaanka ku dhaqanina ay nabad ay qaateen.
Isaga oo ka hadlayey kulan ay Isaga iyo wasiirka arrimaha dibadu la yeesheen jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Imaaraadka Carabta waxa uu yidhi “Qolooyinka dibadda wareegaya ee colaada horuniya waxaan u sheegayaa in ay ka waantoobaan oo dadkooda soo raacaan. Colaadii way dhammaatay ee ku soo biira nabadda oo waliba Cali Khaliif waa nin wayn oo muxtarima, waar Axmed Ismaaciil Samatar ku dayo oo dadkaaga u kaalay ayaan odhan lahaa”.
“Cali Khaliif wuu hadlay oo wuxuu yidhi Buuhoodle ayaan aqaanaa oo Buuhoodle Somaliland iman mayso, Buuhoodle nabad bay qaadatay waana Somaliland. Colaad danbe iman mayso colaad danbe galimayso, Cali-na waxaan kula talinayaa in dadkiisa iyo dalkiisa u baahan inuu yimaado oo wuxuu u qaban karo la qabto waanan soo dhawaynaynaa hadduu imanayo,”ayuu Wasiirka Caafimaadku.
Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye waxa kale oo uu tafaasiil ka bixiyay taariikhda Somaliland, waxaana uu yidhi “Somaliland kamay bilaamin taariikhdeedu SNM, boqol iyo soddon sano oo taariikh ah ayeynu leenahay, waa in taariikhdeena cid waliba iska dhex aragto taasaan kaga gudbi karnaa qobqobka inaga oo mid ah waxaynu kaga baaqan karnaa in aan khalad kale galno isku duubni iyo midnimo iyo in aynu taageerno xukuumadda”.